That's so good, right?: အတွေ့အကြုံသစ်
ကျွန်တော် အသက်20မပြည့်ခင်အထိ sex ကိစကိုတစ်ခါမှ မစမ်းသပ်ခဲ့ဘူးပါ။ မိန်းကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားပေမယ့် ကြောက်ပြီးမပြောရဲ ။ မစရဲပါဘူး။ အောကားတွေသာကြည့်ပြီး ဂွင်းထုတာ။ သူတို့ကိုမှန်းပြီးထုတာပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကြောင့် ကျွန်တော် sex ဇာတ်လမ်းက အစပျိုးပါတော့တယ်။
သူက ကျွန်တော်ကိုမြင်မြင်ချင်း မင်းကအကောင်တာသေးတယ်။ ၀ါသနာတော့ကြီးမယ့်ပုံပဲဆိုတယ်။ သူကတော့ဘာပြောပြော လိုးတာချ တာမပါရင်မပြီးဘူး။ လူချင်းတွေ့တာတောင် စကားနဲ့အပြင် လက်က ပေါင်ကြားထဲလာပြီး လှမ်းဆွဲတတ်တာ။ သူက သည်ကိစစမှာ ဆရာဖြစ်နေတယ်လေ။ မင်းကိုသင်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ဇာတ်လမ်းကစတော့တာပဲ။ သူအိမ်ကိုခေါ်ခေါ်ပြီး အောစာအုပ်တွေ။ အပြာဓာတ်ပုံတွေ။ အပြာကားတွေ ကျွန်တော့်ကိုခိုးခိုးပြတယ်လေ။ အားရင်လူကိုဖက်ထားပြီး။ ပြင်သစ်အနမ်းဆိုလား နမ်းသေးတယ်။ မိန်းကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုချတာလိုးတာဆိုပြီး သူ့စွန့်စားခန်းတွေကိုအမြဲလက်ချာ ရိုက်နေကျ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကျောင်းသားပေါ့။
သူကမိန်းကလေးတွေတင်မကဘူး ယောကျာင်္းချင်း man to man ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာပါ စလာတော့။ ကျွန်တောဘ၀င်မကျပါဘူး။ ယောကျာင်္းချင်းရှက်စရာကြီး။ ရွံစရာကြီးဆိုပြီး သူ့ကိုအမြဲပြန်ပြောနေကျ။ သူကတော့မင်းကောင်းမှန်းမသိလို့ပါ။ စမ်းကြည့်မလားလို့ စာလာပါသေးတယ်။
သူက တစ်နေ့ မင်းကြိုက်သွားစေရမယ်တဲ့။ ယောကျာင်္းချင်းတော့ တစ်ခါမှ မလိုးဘူး။ မဆက်ဆံပါဘူး။ သည်လိုနဲ့ ကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်တုန်း ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုမှာအလုပ်ကြမ်းဝင်လုပ်တုန်း။ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးတဲ့ man to man ဇာတ်လမ်းကစလာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်မှာ ယောကျာင်္းတွေချည်းပဲလေ။ ကျွန်တော်က အသက်ငယ်ဆုံး။ ကျန်တာ ကျွန်တော့်ထက်ကြီးတဲလူတွေပဲများတယ်။ သူတို့ထဲက ကိုလတ်ဆိုတဲ့ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို တော်တော်ဂရုစိုက်တယ်ဗျာ။ ဘာပဲလုပ်လုပ်သူက ကျွန်တော့်အနားလာလာကပ်နေတယ်။ သူကအလုပ်ကြမ်းလည်းသိပ်မလုပ်နိင်တဲ သူချင်းအတူတူ ကျွန်တော့်အတွက်အကူအညီမရတဲ့အပြင် အလုပ်လုပ်တဲသူတွေက မင်းတို့က လင်မယားတွေလားလို့ တပူးပူးနဲ့လို့အပြေခံရလို့ ကျွန်တော်က သူ့ကိုသိပ်မကြည်ပါဘူး။ ဟုတ်တယ်လေ။ မသကာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့လင်မယားအပြောခံရတာဆိုတော်သေး ။ သူကပြောသေးတယ် ။ ဟုတ်တယ်။လင်မယားပဲတဲ့။ အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဘယ်သူက ယောကျာ်း။ ဘယ်သူက မိန်းမလဲဆိုတော့ ။ သူက အရေးမကြီးပါဘူး။ ကျွန်တော့်သဘောပဲ တဲ့။ သေလိုက်ပါလား။ ခင်ဗျားကြီးကို အတူအလုပ်လုပ်နေတာတောင် တော်လှပြီး။ ကြည့်လို့ကိုမရတော့ဘူး။
အားရင် မင်းအသားလေးကဖြူတယ်နော်။ လီးလည်းဖြူမှာပေါ။ ဒါပေမယ့် မဲတာများတယ်။ စကားနဲ့တစ်မျိုးစတာကတမျိုး၊ လူကိုလာပြီး စသလိုဖက်ဖက်ထားတာကတစ်ဖုန်။ ရောယောင်ပြီး ဖမ်နမ်းတာနဲ့။ လက်ကအငြိမ်မနေပဲ လီးလာလာကိုင်တာ၊ ပြီးရင် မင်းကလူသာသေးတာ လီးက မသေးဘူးလို့ဆိုသေး။ တစ်ခါတစ်လေ လူရှေ့မရှောင်ပြောလို့ စိတ်ညစ်ရတယ်လဲခဏခဏပဲဗျာ။ သူက အလုပ်ပြီးလို့ရေချိုးရင် လူကိုလာကြည့်ပြီး အကြီးကြီးပဲလို့အော်ပြောတာသေးတယ်။ ကျွန်တော် ရှက်တာပေါ့ဗျာ။ တစ်နေ့ အလုပ်တစ်ခုလက်စသတ်ခါနီး ကိစစတစ်ခုရှိလို့ လက်သမားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အပြင်သွားပြီး ပြန်မလာနိုင်ပဲ ဖုန်းနဲ့ မင်းတို့ အလုပ်သိမ်းပြီး ဘယ်ကိုလိုက်လာခဲ့လို့ မှာခဲ့တယ်။ ကိုလတ်ဆိုတဲ့လူအတွက် အခွင့်အရေးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာတင် ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ဇာတ်လမ်းစတာပါပဲဗျာ… ကျွန်တော်လည်းအလုပ်သိမ်းပြီး ရေမချိုးခင် အိမ်သာမှာသေးသွားပေါက်ရင်း ညကဟိုကောင်ဆီကယူလာတဲ့ အောစာအုပ်ကိုဖတ်မိတော့ မနေနိုင်ပဲ ဂွင်းတိုက်မိတယ်။ ကိုလတ်ဆိုတဲ့လူ ရေချိုးနေပြီးအထင်နဲ့ အိမ်သာတံခါးကို သေချာမပိတ်မိဘူးဗျ။
အလားလား သူက ကျွန်တော် စာအုပ်ဖတ်တာရော ဂွင်းထုတာကိုရော သေချာခြောင်းကြည့်နေတာကိုဗျ။ ကျွန်တော်ကိစစပြီးလို့ အပြင်အထွက်မှာ သူနဲ့ ပက်ပင်းတိုးပါရော။ သူက မင်းလုပ်တာအာလုံးငါမြင်တယ်။ ငါလျှောက်ပြောမယ်ဆိုပြီး ပြောထွက်သွားတယ်။ ပထမတော့ ကျွန်တော်လည်းကြောင်ပြီး နောက်မှ ဟာ မပြောပါနဲ့လို့လိုက်တားပေမယ်။ မမှီိဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ရေချိုးလိုက်တယ်။ ရေချိုးပြီး အ၀တ်အစားလည်းတုန်း ကိုလတ်ရောက်လာပြီး။ မင်းစာအုပ်ဖတ်ပြီး အိမ်သာမှာ ဂွင်းတိုက်တာ ငါသူများကိုလိုက်မပြောစေချင်ရင် တော့ တစ်ခုတော့လိုက်လျောရမယ်တဲ့။ ဘာလဲဗျာ ဆိုတော့ မင်းလီးဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာ ငါကိုင်ကြည့်မယ်။ ဒါဆို ငါမပြောတော့ဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ယောကျာင်္းအချင်းချင်းအတူတူကိုဗျာ ခင်ဗျားကလဲ မုန့်ဝယ်ကျွေးဆိုကျွေးမယ်ဗျာ ဘီယာတိုက်ဆိုတိုက်မယ်။ မပြောနဲ့လို့ပြောပေမယ့်မရပါဘူး။. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကအတူတူပဲ ခင်ဗျားကိုင်ကြည့်ချင်ရင်လဲ ကြည့်ဗျာ။ ကျွန်တော်အသားပဲ့သွားတာမှမဟုတ်တာဆိုပြီး လှန်ပြလိုက်တော့။
ဟေ့ကောင်လေး သည်လိုဖြစ်ကတတ်ဆန်းပြလို့ဘယ်ရမလဲ ဆီုပြီး ကျွန်တော့်လီးကို ဖမ်းဆွဲပြီး လာခဲ့ဆိုကာ။ အခန်းတစ်ခုထဲရှိ ခုံတန်းလျားပေါ်ကိုဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှ မရုန်းနိုင်ဘဲ တန်းလန်း တန်းလန်းနဲ့ပါသွားပါတော့တယ်။ ခုံပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ကိုထိုင်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားထဲသူဝင်ကာ စိမ်ပြေနေပြေကိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က တော်ပြီရပြီး သည်လောက်ဆိုတော်တော့လို့ပြောပေမယ့်မရဘူးဗျ နေစမ်းပါအုံးဆိုပြီး ကျွန်တော့်လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီး။ ကျွန်တော့်လီးကို အသေချာပွတ်သက်ကာ ဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်နေသဖြင့် ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ပါ။ လီးကလည်း ပြောနေရာက မာတောင်စပြုလာဖြင့် တော်ပြီဗျာ ကျွန်တော်နေရခက်တယ်လိုပြောပေမယ့်။ သူက အံမယ်ဖီလ်းတွေ့နေတာများ သည်မှာ လီးကတောင်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး။ အရည်ကြည်တွေတောင်စိမ့်လာပြီး အသာငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့။ သူပြောသလိုပင် ကျွန်တောဖီလ်းတွေ့နေပါသည်။
တစ်ခါမှ ကိုယ်တိုင်မှလွဲပြီး အခုလို သေသေချာချာဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ချင်းမခံဖူးသဖြင့် ရှက်သော်လည်း အရသာမှာ လီးတစ်ချောင်းလုံး ကြမ်းတမ်းပူနွေးတဲ့လက်တစ်ခုရဲ ပွတ်သက်မှုကြောင့် တစ်မျိုးကောင်းနေပါသည်။
အောစာအုပ်ဖတ်ထားသဖြင့်လည်း စိတ်တွေက မငြိမ်ဖြစ်နေရသည့်အထဲ အခုလိုဆိတ်ကွယ်ရာမှာ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးပြီးဝါရင့်ပုံရတဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ဦးက ဂ၇ုတစိုက်ဂွင်းတိုက်ပေးနေသဖြင့် ကျွန်တော်မှာမနေနိုင်လောက်အောင် ဖီလ်းတက်ကာ လီးမှာအစွမ်းကုန်တောင်နေတော့သည်။ ရှက်လည်းမရှက်နိုင်တော့ သူတိုက်ပေးတာကိုအားမရဖြစ်လာပြီး သူ့လက်ကိုအပေါ်ကထပ်ကိုင်ကာ ခပ်မြန်မြန်ဂွင်းထပ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်လာပါတော့သည်။
ကျွန်တော့်လီးအားဂွင်းတိုက်ပေးနေသော ကိုလတ်၏လက်အား ကျွန်တော်အပေါ်ကထပ်ကိုင်ကာ ခပ်မြန်မြန်ဂွင်းတိုက်နေသလို။ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်က လဲသူ့အလိုလိုကိုလတ်၏ခေါင်းရှိဆံပင်များအားပွတ်သပ်ကာ ဆွဲသပ်ပေးနေမိသည်။ ရင်ထဲတွင်လည်း ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်နေသလိုလိုတလှပ်လှပ်။ ရင်တစ်ခုလုံး ၀ုန်းဒိုင်းကျဲခုန်နေသည်။ မျက်စေ့များလဲမေးစင်းလားပါတော့သည်။ ကျွန်တော် အရင်ကသူ့ကိုကြည့်မရသော်လည်း အခုအလိုလို သဘောကျနေမိသည်။ ကျွန်တော့်မျက်စေ့ထဲတွင်သူက ယောကျာ်းလေးမဟုတ်တော့။ ကျွန်တော်သဘောကျနေသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်လိုမြင်လာသည်။ ကျွန်တော်သူ့၏အကိုင်အတွယ်များကြားတွင် ကြာကြာမတောင့်ထားနိုင်တော့။ လီးတစ်ခုလုံးကျင်တက်လာက သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ ကျွန်တော်ထိုင်နေသောခုံနှင့် သူ၏လက်များကိုပေကျန်ကုန်တော့သည်။
ရင်ထဲတွင်လည်း တိမ်ပေါ်လွင့်မျောနေသလို ဟာကခနဲဖြစ်သွားသည်။ သူကတော့ပြံးစေ့စေ့ဖြင့် ကျွန်တော့်အား နည်းနည်းပါးပါးထိန်းပါဦးလား။ ဇွတ်ပဲဟုဆိုသည်။ ကျွန်တော်လည်း အားနာသွားမိသည်။ ဆောရီးဗျာ။ ကျွန်တော်မထိန်းနိုင်တော့လို့ လိုပြောကာ ပေးကျန်နေသည်များကို သူနှင့်အတူ လိုက်သုတ်မိတော့သည်။ သူ့ကိုကြည့်ပြီး အခုမှာကျွန်တော်ရှက်ရမှန်းသိလာသည်။ သူကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို ကောင်းလားတဲ့ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ယောင်ပြီး ခေါင်းညိမ့်မိသည်။ သူကသဘောကျစွာ နဲ့ပါးကိုလာဆွဲလိမ်ကာ လီးအားတစ်ချက်ဆောက်ဆွဲလိုက်ပါသည်။ အား...။
ကျွန်တော်ပြီးမှ ဟန်ထွဋ်ဇော်၏စကားကို ပြန်ကြားမိကာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသထွက်မိပါသည်။ ကျွန်တော်စိတ်ကူးက သည်လိုမျိုး ဇာတ်လမ်းမျိုးတွင် ကိုယ်ချစ်သောကောင်မလေးနဲ့သာဖြစ်ချင်သည်။ အခုလို ယောကျာင်္းချင်းဖြစ်ဖို့ စိတ်ကူးထဲတောင်မရှိ။ သည်အဖြစ်ပျက်သာ ယောကျာ်းချင်းသိပါက ကျွန်တော့်အား လွိင်တူဆက်ဆံသူအဖြစ် မြင်ကစကြတော့မည်။ မိန်းကလေးများသိပါက ရွံမုန်းသွားမည်ဟု စဉ်းစားမိသော အခါ ငါလုပ်တာမှားများသွားပြီလား ဟု ထင်ကာ စိတ်ညစ်သွားပါတော့သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ပြန်ဒေါသဖြစ်နေမိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ခံစားလို့တော့ကောင်းသာိးဟု မသိစိတ်ကသတ်မှတ်နေပေပြီး။ သည်နောက်ပိုင်း အခုလိုကိစမျိုးမဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းနေမှဟု စဉ်းစားကို ကိုလတ်အား ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်နေပါသည်။ အလုပ်ကိစပြီးလျှင် သူနှင့် မပတ်သက်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ ကိုလတ်မျက်နှာလည်း ကျွန်တော်မကြည့်ရဲပါ။ သည်ကိစကိုပြန်မြင်ပြီးရှက်နေမိသည်။ သူကတော့ ကျွန်တော့်အား အတင်းလာရောနေပါသည်။
ကျွန်တော်ရှောင်မှန်းသိလို့ သူက မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ ဒါကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကွ။ မင်းငယ်ပါသေးတယ်။ တစ်နေ့မင်းသိလာမှာပါ။ ငါသည့်ထက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်ပေးဦးမယ်။ တော်ပါတော့ဗျာလိုသာ ကျွန်တော်ပြောပြီး ခပ်မြန်မြန်သူ့အရှေ့က ထွက်ခဲ့သည်။ သည်လိုနှင့် ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားသော ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီး။ လက်သမားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုထပ်ရှာထားပြီး သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တွင် ပြန်ပြီးအလုပ်အသစ်စပေတော့မည်။ နောက်အလုပ်အတွက် ကျွန်တော်သူတို့နှင့်မလုပ်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်ကာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ညနေပြန်ခါနီးတော့ မင်းကလဲကွာအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါဦး။ ဘာလိုဖြစ်လို့လဲ။ ငါ့ကြောင့်လား။
မဟုတ်ပါဘူး။ သည်အလုပ်က ပင်ပန်းလို့ပါ။
မင်းညကျရင် လမ်းထိပ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ကွာ မင်းထွက်သွားတာ ငါစိတ်မကောင်းဘူး။ မင်းနှုတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်သင့်တယ်လို့ပြောသည်။ မင်းလာခဲ့နော် မလာရင် ငါဟိုအကြောင်းတွေကို သူများလျှောက်ပြောလိုက်မှာ။
ကျွန်တော်လန့်သွားသည်။ ဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်စောင့်နေဗျာ လာခဲ့မယ် လို့ ကတိပေးလိုက်မိသည်။ ကျွန်တော် တော်တော်တုံးတာပဲ။ သူကရော သည်ကိစကိုလူသိခံနိုင်လို့လား စဉ်းစားသင့်သည်။
ဒါပေမယ့် ပေးထားပြီးသားကတိတော့ မဖျက်လိုတော့။ နောက်ပြီး ဒါနောက်ဆုံးလေ။ နောက်သူနဲ့တွေ့စရာမရှိတော့။
ညနေစောင်းတော့ ကျွန်တော် ကိုလတ်နှင့် ချိ်န်းထားသည့် နေရာကိုသွားမိသည်။ သူကတော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ မင်းလာမှလာပါ့မလားလို့ ဟု ဆိုသည်။ သည်လိုနှင့် သူနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီး ငွေရှင်းကာ ထပြန်ဖို့အလုပ်။ သူက ဟာအစောကြီးရှိသေးတယ် မပြန်နဲ့ဦး။ ငါတို့ဗွီဒီယိုသွားကြည့်မယ် လေ ဟိုကွာ မင်းကြိုက်တဲ့ အမေရိကန်အောကားလေ။ အောကားဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော်တွေဝေသွားသည်။ သည်လိုမျိုးကားတွေက အိမ်မှာကြည့်လို့မရ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစတ်ထွဋ်ဇော်ကလဲ အိမ်ပြောင်းသွားသဖြင့် သူ့ဆီညမအိပ်နိုင်သဖြင့် လိုက်မကြည့်နိုင်။ ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာကို ကိုလတ်ကသိနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော်ကလဲ ဘယ်မှာသွားကြည့်မှာလဲဗျ လို့ ပြန်မေးလိုက်သည်။ ရုံမှာကြည့်မှာပေါ့ကွာ။ ဘာလဲ မင်းမကြည့်ချင်လို့လား။ ဒါဆိုလဲရ...။ ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ရုံက သည်လိုကားမျိုးပြလို့လဲဗျာ။ မင်းငယ်သေးတယ်။ ပြတဲ့ရုံရှိတယ် 8နာရီကျော်မှပြတာ သည်နားတော့မဟုတ်ဘူး နည်းနည်းဝေးတယ်။ အဲ့သည့်မှာ ယောကျာ်းလေးတွေပဲရှိတာ။ ၀ါသနာပါတဲ့လူတွေကြည့်တာပေါ့ကွာ။ ၀င်ကြေးကတော့ 100ကွာ ။ ဘယ်လိုလဲ။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဟန်မဆောင်နိုင်ပါ။ ဒါဆိုသွားတာပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော့အားတွဲဖက်ကာ ဗွီဒီယိုရုံသို့ခေါ်ဆောင်လာပါတော့သည်။ လမ်းတွင် ကျွန်တော့်အား ကွမ်းယာတစ်ယာကျွေးသည်။ ကျွန်တော်ငြင်းရန် စိတ်ကူးမိပေမယ့် ငြင်းမရမည့် အတူ မထူးဘူးဟုဆိုကာ ကွမ်းယာအား စ၀ါးလိုက်သည်။ ကွမ်းသီးမူးတာလား ဆေးမူးတာလားမသိ ချွေးတွေပြန်ကာ ကျွန်တော်မူးနေသည်။ အရာအားလုံးက တရိပ်ရိပ်ဖြစ်နေသည်။ ညီလေးမင်းမူးနေပြီးလား မင်းကွာပြော့လိုက်တာ လာဆိုကာ ကျွန်တော့အားတွဲဖက်ကာ ဗွီဒီယိုရုံသို့ခေါ်ဆောင်လာပါတော့သည် ရုံရှေ့တွင် မိန်းကလေးများ ထွက်လာသည်ကိုတွေ့သောခါ ကျွန်တော်လန့်သွားသည်။ ဟါသည်ဟာက ရိုးရိုးဗွီဒီယိုရုံပါလား။ ခင်ဗျားပြောတော့။ ကျွန်တော့်စကားမဆုံးခင် သူက ကျွန်တော့်ပါးစပ်အားလက်ဖြင့်ပိတ်ကာ။ အဲဒါမြန်မာကားလာကြည့်တဲ့လူတွေထွက်လာတာ။ အခုအပြာကားပြတော့မှာ ။
သူပြောသလိုပင် ရုံတစ်ခုလုံး တဖြည်းဖြည်းနှင့် အရွယ်စုံဆိုဒ်စုံ ယောကျာ်းများရောက်လာတော့သည်။ မကြာခင်တံခါးပိတ်ကာ အောကားအားဆက်ပြသည်။ ကျွန်တော့ရင်ထဲတွင့်ပူကာ သွေးများလည်းပိုဆူသလိုလူကလည်းပိုမြူးသလိုဖြစ်လာပါသည်။ ကျွန်တော်ခေါင်းမူသည်မှာ အတော်သက်သာလာပါတော့သည်။ ရင်ထဲတွင်တော့ပူကာ သွေးများလည်းပိုဆူသလိုလူကလည်းပိုမြူးသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ကိုလတ်ကတော့ မင်းကြည့်ချင်တဲ့အောကားကြည့်ရတော့ မင်းခေါင်းမမူးတော့ဘူးမဟုတ်လားဆိုကာ လီိးအားဆွဲလိမ်ပါတော့သည်။ ဟာနေစမ်းပါဗျာ။ လူကြားထဲ ခင်ဗျားကတစ်မှောက်။ သူကတော့ အောကားဆီသို့ အာရုံရောက်ဟန်မတူ ကျွန်တော့်လီးအားလာကိုင်သည်။ ခင်ဗျားကလည်းဗျာ.. ကောင်းကောင်းနေစမ်းပါ… ပြောမှသာပြောရတာ ကျွန်တော်မရုန်းမိပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်လီးကြီးကသူကိုင်လိုက်မှာပိုတောင်လာသည်။
လူတွေကလဲ အောကားကိုအာရုံရောက်နေသဖြင့် ကျွန်တ်ာတို့ အဖြစ်ကိုမသိပါ။ ကျွန်တော့်လီးမှ နဂိုအတိုင်းဆို အရှည်က 4လက်ကျော်။ လုံးပတ်က 3.5လက်မရှိပါသည်။ တောင်လာရင်တော့ အရှည်က6လက်မကျော် လုံးပတ်က 4.5ကျော်ရှိလာပါသည်။ အောကားထဲက တာဇံဇာတ်လမ်း ကလည်း ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် အလွန်ကောင်းသလို သရုပ်ဆောင်တွေကလဲ တော်ပါသည်။ ယောကျာင်္းတွေကလဲ ဗလတောင့်က လီးကြီးတွေမှာ အလွန်ကြီးမှားရှည်လျားသလို အလိုးလည်းကောင်းကြသည်။
စော်တွေမှာလဲ တင်ရင်အလွန်ကြီးက ပစ္စည်းကောင်းက အပေးတော်သဖြင့် ကျွန်တော့်မှာ ဇာတ်ကားထဲက တာဇံကိုကြည့်ရင် ကိုယ်ပါတာဇံဖြစ်နေပါတော့သည်။ လီးထိပ်မှာလဲး အရည်ကြည်တို့ ရွဲရွဲစိုနေပါသည်။ ဒါကို ကိုလတ်က လာလာပြီး မသိမသာ ကလိနေသေးသဖြင့် သွေးပိုဆူသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ပါ။ ဒါ့ကြောင့်
ကိုလတ် ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဗျာ။ “ဟာ” မင်းကလဲ သည်မှာကောင်းခန်းရောက်နေပြီး နေပါဦး။
“မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ” ခင်ဗျား ကြည့်ချင်ရင်ဆက်ကြည့် ကျွန်တော်ပြန်ပြီး
မျက်စေ့ထဲတွင် အောကားကလိုးခန်း မှုတ်ခန်းတွေက ဘယ်လိုမှမထွက်။ လီးကလဲ အတောင်မရပ်။ သည်ကိုလာတုန်းကလဲ အစီအစဉ်သေချာမသိသဖြင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီမ၀တ်လာမိ။ အခုမှတော့ တောင်နေသောလီးကို အပေါ်ကလုံချည်စုကိုင်ကာ လုံချည်မသလို မပြီးဂွင်းထုရန် လူရှင်းပြီး မှောင်သောနေရာဆီသို့ သုတ်ချေတင်ခဲ့ပါတော့သည်။
ကိုလတ် ပါလား ။ သူအပြေးကလေးလိုက်လာသည်။
မသိဘူးလေ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဇောနဲ့ကို သူ့အသံကို မကြားမိ ခုမှသိသည်။ သူတော်တော်ပြေးလိုက်လာရသည်။
“ဘာလို့ ပြီးအောင်မကြည့်တာလဲ ကွာ မင်းကလဲ ကောင်းခန်ရောက်နေမှကွာ”
“မှန်းစမ်း” ဆိုက သူ့လက်ကြီးက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားထဲက တောင်နေသောလီးကြီးကိုလှမ်းဆွဲကာ အသာပွတ်ချေပေးနေသည်။
ကျွန်တော်ကလဲ ပထမအကြိမ်တုန်းကလို မငြင်းမိတော့။ တော်တော်ထန်နေသဖြင့် အသာမှိန်းနေလိုက်သည်။
သူက လုံချည်စကိုအသာလှန်ကာ ကျွန်တော့်လီးကို ဒစ်ပေါ်အောင်အနောက်သို့ ဆွဲလှမ်ကာ သေချာကြည့်နေသည်။
ထို့စဉ် လူသံကြားသဖြင့် ကျွန်တော့် သူ့ကိုအသာတွန်းကာ လုံချည်ကိုပြန်ဖုံးလိုက်သည်။
တော်သေးသည်။ သည်လူက ရိုးရိုးတန်းတန်းအိမ်ပြန်တဲ့လူဖြစ်နေသည်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နောက်ကျောမလုံတော့သဖြင့် သူက
“နောက်ကျနေပြီး ကိုလတ်၊ နောက်မှ သွားမယ်ကွာ ၊ အခုပြန်ရအောင် ၊ အိမ်ကစိတ်ပူနေမယ်”
“မင်းကလဲကွာ ဟိုမှာသူငယ်ချင်းနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာနောက်ကျနေလို့ပြောလိုက်ပေါ့“
“လာပါကွာ မင်းကို အောကားထဲက အမေရိကန်မတွေလို သေချာမှုတ်ပေးမယ် ။ မင်းကြိုက်သွားစေရမယ်။ လာပါကွာ ညီလေ။”
သူအဆွယ်ကောင်းသလို ကိုယ်တိုင်ကလဲ အမှုတ်ခံချင်နေသည်။ တစ်ခါမှ မခံဖူးသဖြင့်ခံချင်သည်။ အောကားထဲမှာ မရွံမရှာမှုတ်ပေးနေသည်များ ကြည့်ရင်းလူပါမနေနိုင်။ အမှုတ်ခံရတဲ့ဘဲတွေကလဲ ကြည့်ရသည်မှာ တော်တော်ဖီးတက်သည်ထင်သည်။ တအင်းအင်းနှင့်
စိတ်ကသာ စဉ်းစားနေသည်။ လူကတော့ ကိုလတ်ခေါ်ရ လူရှင်းပြီး တိတ်ဆိတ်သည့် မမြင်ကွယ်ရာသို့ သွားနေပါသည်။
ကိုလတ်ခေါ်သွားသောနေရာက လူရှင်းပြီးတောင့်ကျသော ခြံအနည်းငယ်ထူသော စာသင်ကျောင်းနံရံနားဖြစ်သည်။ မှောင်နေပေမယ့်လည်း သေချာကြည့်လိုက်ရင် တော့ မြင်ရသည်။
ကိုလတ်က ရောက်တာနှင့် သူလက်ကကျွန်တော့်လုံချည်ကိုဆွဲလှန်ကာ လီးကြီးကို ဆွဲကိုင်လိုက်တော့သည်။
ကျွန်တော့်လီးကြီးမှာ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းနှင့် အရည်ကြည်များရွဲပြီး ဒစ်ကြီးပေါ်က မာတောင်နေပါတော့သည်။
“ဟား မင်းလီးကြီးက အရင်ကထက်ပိုကြီးလာသလိုပဲကွာ”ဟုပြောရင် ကိုလတ်က ကျေနပ်သလိုသေချာကြည့်က ကျွန်တော့်လီးကို ပွတ်ချေပေးနေသည်။
ကျွန်တော့်လီးကြီးမှာ ပိုပြီးတောင်လာကာ အပေါ်သို့ပိုထောင်တက်လာတော့သည်။
ပြီးတော့ ကိုလတ်က လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲကိုင်ကာ ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဂွင်းတိုက်ပေးနေတော့သည်။ အမှန်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်အောကားကြည့်သည့်အရှိန်။ စိတ်ထန်နေသည့်အချိန်၊ ကိုလတ်၏ ကျွမ်းကျင်စွာ ဂွင်းတိုက်ဆော့ကစားမှုကြောင့် ပထမဆုံးအကြိမ်မှာလိုပင် ခဏနဲ့ ပြီးသွားမှာဖြစ်သော်လည်း စားထားသောဂွမ်းယာထဲမှ ဆေး၏တန်ခိုးကြောင့်ရိပ်ရိပ်မူးနေသလို။ ကွမ်းဝါးပြီး ။ ထွေးထွေးထုတ်နေရသဖြင့်။ တော်တော်နှင့်မပြီးနိုင်တော့ပါ။
ခစနေတော့ ကိုလတ်ဂွင်းတိုက်ပေးတာကိုရပ်ပြီး မတ်တပ်ထရပ်လိုက်သည်။
ကျွန်တော်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့
သူ့ပါးစပ်ထဲက ကွမ်းကိုထွေးထုတ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ကွမ်းယာကိုထွေးထုတ်လိုက်ဖို့ ပြောသည်။
တကယ်တော့ ကိုလတ်သည် ကျွန်တော့်ထက်ပိန်သော်လည်း ။အရပ်က 5.5လောက်ရှိသဖြင့် ကျွန်တော့်ထက် 2လက်မမြင့်နေသည်။ သို့သော် သူကကိုယ်ကိုအနည်းငယ်ငိုက်ကာ ကျွန်တော့်ကို ရွှန်းရွှန်းစားစားတက်ချက်ကြည့်ကာ ပြုံးလိုက်ပြီး။ ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနေရာလက်မကျန်အောင် အနမ်းမိုးရွာပါတော့သည်။ ပထမကျွန်တော်ကြောင်နေသော်လည်း။ သူ့အလိုလို အလိုက်သင့်ပြန်နမ်းပေးမိသည်။ လက်ကလဲ သူ့အလိုလို နှစ်ယောက်သားသိုင်းဖက်မိသားဖြစ်သွားသည်။
ကိုလတ်ကတော့ ကျွန်တော့်ပခုံးနှင့် ကျော်ပြင်။ ခေါင်းတို့အား တယုတယပွတ်သပ်ပေးနေသလို။ ကျွန်တော့်လက်ကလဲ အလိုလို သူ့ဖင်သားများအားပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးမိသည်။
“အား .. ကောင်းလိုက်တာ ကလေးရယ်”ဟုဆိုကာ။ သူက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအားစတင်စုပ်ယူလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပြန်ခွာကာ။
“မင်းနှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက နည်းနည်းနဲ့ စူးလိက်တာကွာ”တဲ့...
ဒါပေမယ့် သူကမလျော့ပါ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်စုပ်ကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သူ့လျှာထိုးထည့်ကာ ကစားနေသည်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ညှိုထားခံရတဲ့လူလို တစ်ကိုယ်လုံး လေပေါ်မှာမြောက်နေသလိုခံစားရကာ ကိုလတ်ကစားသည့်အတိုင်းတန်ပြန်ကစားပေးနေမိသည်။
ကျွန်တော်အတော်ဖီးလာနေသည်။ ဒါပေမယ့်လီးကတော့မာတောင်နေဆဲ။ ရင်တွေတအားခုန်ကာ။ ရေဆာသလိုလိုဖြစ်နေသည်။ ဒူးတွေလည်း မမြဲတော့ နံရံရှိပြီး နှစ်ဦးသားဖက်ထားလို့သာ။ မဟုတ်ရင်တော့ လဲကျသွားနိုင်သည်။
ခဏကြာတော့ ကိုလတ်လက်က ကျွန်တော့်ရင်ကိုလာစမ်းကာ
“ဟား ရင်တွေအရမ်းခုန်နေပါလား ဟင်း ဟင်း”ဆိုကာ ကျွန်တော့် အင်္ကျီကြယ်သီးအား ဖြုတ်ကာ ကျွန်တော့်ရင်ပါတ်အားနမ်းပြီး ခပ်စူစူဖြစ်နေသည့် နို့နှစ်လုံးအား လျှာဖြစ့်ရပ်ကာ စုပ်ပေးနေသည်။
ပြီးတော့ ကိုလတ်က ကျွန်တော့်လီးကိုပြန်ကိုင်ကာ
“ကိုလတ်ကို အဲ့သည်လိုလုပ်ပေးပါလား ညီ“တဲ့
သူ့တီရှပ်ကိုဆွဲလှန်ကာ ရင်အုံသေးပေမယ်။ မိန်းကလေးနီု့လို စူပြီးချွန်နေတဲ့ သူ့နို့လေးအား လျှာဖြင့်အသာရပ်ပေးနေမိသည်။ သူလည်း “အင့်”ခနဲပတစ်ချက်အော်ကာ
“အား ... ကောင်းလိုက်တာ. မင်းကွမ်းစားထားတဲ့လျှာလေးက အခုမှကောင်းတယ်တဲ့”
ဟုတ်မှာပါ ကွမ်းစားထားသဖြင့် လျှာကကြမ်းက ပူနေသဖြင့် ကိုလတ်အထူးကောင်းနေပါသည်။
ကျွန်တော်နို့ကိုလျှက်ပေးနေမိသော်လည်းလက်ကတော့ အော်တို ကိုလတ်ဖင်သေးသေဖောင်းဖောင်းလေးအား ဆုပ်ချေပေးနေမိသည်မှာ မရပ်တော့ပေ။
“အား.. အင်း..ဟုတ်ပြီ ကောင်းတယ်...နို့ကိုစတအားစုပ်လိုက်”တဲ့
ဘယ်လောက်ကြာသည်မသိတော့....နားမှာတော့ ကိုလတ်၏ ငြီးငြူသံများကိုကြားနေရသည်။
နောက်တော့ ကိုလတ်က ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ဆွဲမက ကျွန်တော့်ဟနေသောကြယ်သီးများကိုအားလုံးဆွဲဖြုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ရင်ဘက်မှစကာ ဗိုက်၊ ဆီးခံအထိ တောက်လျှောက်နမ်းပြီး လျှာနဲ့လျှက်သွားသည်။ ဆီးခုံနားရောက်မှ ကျွန်တော့်လုံချည်ကို ပခုံးမှာတင်ထားရန်ပေးလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီးခုံအောက်မှ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တောင်နေသော်လီးကို အရင်းမှလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲကိုင်ကာ သူ့ပါးစမ်ထဲသို့ စုပ်ပြီးငုံခဲလိုက်ပါတော့သည်။
ကျွန်တော့်အသံက သိပ်မထွက်ပါ။ ရေငတ်ပြီး လည်ချောင်းတွေယားနေသလိုခံစားကာ ဖီးတက်နေသဖြင့် ခပ်တိုးတိုးသာထွက်သွားသော်လည်း။ လီးတစ်ချောင်းလုံး ပူနွေးစိုစွပ်သွားကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးများထသွားပြီး ကိုလတ်ခေါင်းအား ကျွန်တော့်လီးနှင့် တအားဆွဲကပ်လိုက်မတော့်သည့်။
ကိုလတ်က အသာပြန်ရုန်းကာ အသံခပ်တိုးတိုးဖြင့်
သူကတော့အောင့်မှာပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ပြောမပြတတ်လောက်အောင်ကောင်းသဖြင့် အခုလိုလုပ်မိလိုက်ချင်းဖြစ်သည်။
လီးက ကိုလတ်ပါးစပ်ထဲသို့ အရင်းထိဝင်သွားတော့သည်။
ကိုလတ်က အသာပြန်ထုတ်ကာ ဒစ်ဖျားကိုလျှာဖြင့်အသာကစားနေသည်။
“အား ..အင်း ..ကောင်းလိုက်တာ.. ကျွန်တော်မနေတတ်တော့ဘူးဗျာ” အသံတုန်တုန်တိုးတိုးဖြင့် ကျွန်တော်မရည်ရွယ်ပဲပြောလိုက်မိသည်။
ပြီးတော့်ကိုလတ်က ကျွန်တော့်လီးတန်ကြီးကို ပါးစပ်မှအသာဆွဲထုတ်ကာ ဆီးခုံနှင့် ပေါင်ခြံများအား လျှက်ပေးနေမိသည်။ ကျွန်တော်ကိုလတ်ခေါင်းမှဆံပင်များကိုအသာဆွဲယူနေမိသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ဖျတ်ဖျတ်လူးနေသလားခံစားရသည်။ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။
လီးကြီးမှာလဲပိုပြီးမာတောင်လာသို ကိုလတ်တံထွေးများဖြင့် အဖုဖုထကာ ပြောင်လတ်နေသည်။
ကိုလတ်က လျှက်နေရာမှ ခဏရပ်ကာ လီးတန်ထက်သေးသော ကျွန်တော့်လဥနှစ်လုံးကို အသာပါးစပ်ဖြင့်ငုံပြီးစုပ်ယူလိုက်သည့်အခါမှာတော့...
“အင်း...အား ...ကိုလတ်...”ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကထွက်သွားသလို။ လက်ကလဲ ကိုလတ်ခေါင်းအား ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည်။ ကျွန်တော်အတော်ကို ခံစားရသည်မှ ကောင်းနေသည်။
ပြီးတော့ကိုလတ်က ကျွန်တော့်လီးဥကိုစုပ်နေရာမှ ပြန်ထုတ်ကာ လီးတန်ကြီးကို တစ်ချက်ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲ ပြန်ထည့်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းထူကြီးနှစ်ခုဖြင့် ခပ်တင်းတင်းဖိကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်လုပ်ပေးနေပြန်သည်။ ကျွန်တော် ပြီးချင်လာပြီး လီးတစ်ချောင်းလုံးလဲ သူ့ပါးစပ်မှာ ပြည့်ကျပ်နေတော့သည်။ ကွမ်းစားထားသော သူ့လျှာကြမ်းကြီးများကလဲ လီးဒစ်ကိုကလိနေသလို ပူနွေးစိုစွပ်တဲ့သူ့ပါးစပ်ကြီး ပြီးတော့ထူးထဲအိစက်လှသည့် သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးများက ကျွန်တော်အမြန်ပြီးဖို့ အားပေးနေတော့သည်။
ကျွန်တော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးအပေါ်သို့မော့တက်သွားကာ ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံး ကော့ပေးနေမိသည်။ မျက်စေ့လည်းမဖွင့်ချင်တော့ပါ။ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးဓတ်လိုက်သလိုတွန့်တက်လာကာ လီးတန်တစ်လျှောက်ကျဉ်ပြီးပူနွေးသွားကာ တစ်ခုခု ထွက်သလိုဖြစ်သွားသည်ကိုတော့သိလိုက်သည်။ ထွက်ကုန်ပြီး ကျွန်တော့်လီးက သုတ်ရည်တွေအများကြီး။ ကိုလတ်ပါးစပ်ထဲကို။
ပြန်ဆွဲထုတ်ဖိုကလည်းမမှီတော့ပါ။ လက်ကလဲ ကိုလတ်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ အတင်းဆီးခုံနှင့်ဆွဲကပ်လိုက်မိသည်။
ကိုလတ်ခမျာ ပါးစပ်တစ်ခုလုံးလီးတန်အဆုံးဝင်တာခံလိုက်ရသလို။ ပန်းထွက်လာသော သုတ်ရည်များကလဲ သူ့ပါးစပ်မှာပြည့်လျှံကာ ထွက်ကျလာတော့သည်။ သူ့မျက်နှာမှာ ကျွန်တော့်ဆီးခုံပေါ်တွင်အပ်လျှက်ကပ်နေသဖြင့် သူအတော်ခံလိုက်ရသည်။
“အူး ဖလူး... “ဆိုတဲ့အသံတွေထွက်လာကာ ကျွန်တော့်ကို အတင်းပြန်တွန်းထုတ်လိုက်သည်။
ကျွန်တော်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ပြီးတော့ ဈာန်ဝင်သွားလို့ဗျာ..
“မင်း စောက်ရမ်းလုပ်တာပဲ” သည်မှာသေတော့မယ် အသက်ရှုကျပ်လိုက်တာ မနည်းအသက်ရှုရတယ့် ဇွတ်ပဲကွာ...
လို့ပြောရင်း သုတ်ရည်များကိုပြန်ထွေးထုတ်နေသည်။ ပြီးမှ အတောင်မရပ်သေးသော ကျွန်တော့်လီးမှ လက်ကျန်သုပ်ရည်များကို သူ့ပါးစပ်ဖြင့်ပြန်စုပ်ကာ ကျွန်တော့်လီးအား ငုံခဲကာ ပြန်လည်စုပ်ပေးနေရင်း သူ့တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တွန့်တက်သွားတော့သည်။ သူလည်းပြီးပြီပေါ့။
နောက်တော့်ကျွန်တော့်ကို ပြန်ဖက်ကာ မတ်တတတ်ရပ်ပြီးနှစ်ယောက်သား အနမ်းမိုးပြန်ရွာကျတော့သည်။
အတန်ကြာမှာ ကိုလတ်က သူ့အ၀တ်အစားပြင်ဝတ်ခါ ကျွန်တော့်ပခုံးမှလုံချည်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝတနေတုန်း သူက ကျွန်တော့်အင်္ကျီကြယ်သီးများကို လိုက်တပ်ပေးနေသည်။
နောက်တစ်ခါဆို တို့ချိန်းပြီး လိုးကျတာပေါ့။
ဟာ ကိုလတ်ကလည်း ယောကျာင်္းအချင်းချင်းစောက်ပတ်မရှိဘဲဘယ်မှာလိုးလို့ရမှာလဲ လိုအလွန်းတဲ့ကျွန်တော်က အထွဋ်တက်လိုက်မိသည်။
“ဖင်ကိုလိုးမှာပေါ့”တဲ့ “ဒါတောင်မသိသေးဘူးလား...နောက်တစ်ခါ သင်ပေးမယ်တဲ့....
သည်လိုနှစ်နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ပခုံးတစ်ယောက်ဖက်ကာ ကိုယ့်အိမ်ကို ကိုယ် လမ်းခွဲးကာပြန်ခဲ့ကြပါတော့သည်။
ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက်တော့ ပထမဆုံးအကြီမ် ယောင်္ကျားအချင်းချင်းလီးမှုတ်ပေးတာကိုခံရသည်မှာ အလွန်ကောင်းလွန်းလှပါသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ထားသလို ကိုယ့်စော်အား အရင်ဦးဆုံးလိုးမယ်လို့ တေးထားပေမယ့် မထင်မှတ်ပဲ လိင်တူချင်းဆက်ဆံမိသဖြင့် အနည်းငယ် စိတ်အလိုမကျပေမယ့်လည်း။ ကျေနပ်သည်ကိုတော့ မငြင်းနိုင်တော့ပါ။......
I got this story from http://lulinnpyo.webs.com/
Posted by Alex Aung at 8:52 PM
SayarGyi Shein (Ending)
SayarGyi Shein (part I)